ONE CHAMPIONSHIP က ONE: KINGDOM OF HEROES ပြိုင်ပွဲဝင်အားကစားသမားများနှင့် မိတ်ဆက်ပွဲကျင်းပ - Lifestyle Myanmar
ONE CHAMPIONSHIP က ONE: KINGDOM OF HEROES ပြိုင်ပွဲဝင်အားကစားသမားများနှင့် မိတ်ဆက်ပွဲကျင်းပ
မြန်မာနိုင်ငံသူ Bozhena Antoniyar က လာမည့် စနေနေ့ညတွင် Rika Ishige ကို အကောင်းဆုံးရင်ဆိုင်ယှဉ်ပြိုင်သွားမည်ဟု ဆို
ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ဘန်ကောက်မြို့၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၂ ရက်။ ။ အာရှသမိုင်းတွင် အကြီးမားဆုံး ကမ္ဘာ့အားကစား ပြိုင်ပွဲများကို ဦးစီးကျင်းပလျက်ရှိသော ONE Championship™ (ONE) သည် ONE: KINGDOM OF HEROES ပြိုင်ပွဲဝင်အားကစားသမားများနှင့် မိတ်ဆက်ပွဲကြီးကို အောက်တိုဘာလ ၁ ရက်နေ့၌ ဘန်ကောက်မြို့ရှိ Central World Plaza တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အခမ်းအနားသို့ မြန်မာနိုင်ငံကိုယ်စားပြု၍ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည့် Bozhena Antoniyar နှင့် ၎င်း၏ပြိုင်ဘက် Rika Ishige တို့လည်း တက်ရောက်ခဲ့သည်။
ONE: KINGDOM OF HEROES ပြိုင်ပွဲကြီးကို လာမည့် အောက်တိုဘာလ ၆ ရက်၊ စနေနေ့တွင် ဘန်ကောက်ရှိ Impact Arena အားကစားရုံတွင် ကျင်းပသွားမည်ဖြစ်ကာ ပြည်တွင်းပြည်ပ ကိုယ်ခံပညာသိုင်းပေါင်းစုံအားကစားသမားများ၏ အကောင်းဆုံးစွမ်းရည်ပြယှဉ်ပြိုင်မှုများကို တင်ဆက်သွားမည်ဖြစ်သည်။ ပြိုင်ပွဲကြီးတွင် အမျိုးသမီးတွဲဆိုင်း ၂ ခုပါဝင်ရာ၊ မြန်မာနိုင်ငံသူ Bozhena Antoniyar နှင့် ထိုင်းနိုင်ငံသူ Rika Ishige တို့က ပွဲဆိုင်းတစ်ခုအဖြစ် ရင်ဆိုင်ယှဉ်ပြိုင်သွားကြမည်ဖြစ်သည်။
Bozhena Antoniyar က မြန်မာနိုင်ငံကို ကိုယ်စားပြု၍ယှဉ်ပြိုင်သည့် ပထမဦးဆုံးပြည်ပပွဲစဉ်ဖြစ်သည့်အတွက် စိတ်လှုပ်ရှားမိသော်လည်း မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိသောကြောင့် ပြိုင်ဘက်ကို အကောင်းဆုံးရင်ဆိုင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဆိုသည်။
ပျော်ရွင်ရတဲ့ ဘဝကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့အတွက် ရိုးရှင်းတဲ့နေ့စဉ်အလေ့အထ (၈) ချက်
Bozhena Antoniyar က “ဒီပွဲအတွက် ကျွန်မအများကြီးပြင်ဆင်ထားသလို ယှဉ်ပြိုင်ဖို့လည်း ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားနေပါတယ်။ Rika က ကျွန်မအတွက် ပြိုင်ဘက်ကောင်းတစ်ယောက်ပါ။ အခု ကျွန်မ MMA က ဆရာတွေနဲ့ သေချာလေ့ကျင့်နေပါတယ်။ ကျွန်မ အဓိက Boxing ကစားသမားဖြစ်ပေမယ့် MMA မှာက အားကစားနည်းပေါင်းစုံဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် ကျန်တဲ့အားကစားနည်းတွေကိုလည်း လေ့လာပြီး သင်ယူနေပါတယ်။ လူကိုယ်တိုင်လာရောက်ပြီး အားမပေးနိုင်ပေမယ့် အဝေးကနေအားပေးတဲ့ပရိတ်သတ်တွေအတွက် ဂုဏ်ယူနိုင်မယ့်ရလဒ်မျိုးရအောင် ကြိုးစားပါမယ်လို့ မြန်မာပြည်က ပရိတ်သတ်တွေကိုပြောချင်ပါတယ်။ ဒီပွဲက ကျွန်မရဲ့ပထမဦးဆုံး ပြည်ပပွဲဖြစ်လို့ ကျွန်မရှေ့ဆက်လျှောက်ရမယ့် ဘဝအတွက် သိပ်ကိုအရေးပါပါမယ်။ နောက်ပွဲတွေမှာလည်း မြန်မာနိုင်ငံအတွက် အကောင်းဆုံးဆက်ပြီး လုပ်ဆောင်သွားဖို့ရှိပါတယ်။ အခုတော့ ဒီပွဲအတွက်ကို အာရုံစိုက်ပြီး အကောင်းဆုံးယှဉ်ပြိုင်သွားနိုင်ဖို့ ကြိုးစားနေပါတယ်။” ဟု ပြောကြားသည်။
Bozhena Antoniyar သည် ONE Championship ပြိုင်ပွဲကြီးတွင် ယှဉ်ပြိုင်သည့် မြန်မာအမျိုးသမီးကစားသမားနှစ်ယောက်ထဲတွင် တစ်ယောက်ဖြစ်လာရုံသာမကဘဲ ပြိုင်ပွဲကြီး၏ အက်တန်ဝိတ်တန်း (Atomweight) ၌ ပထမဦးဆုံးပြိုင်ရသည့်ပွဲတွင်ပင် ပြိုင်ဘက်ကို သမိုင်းဝင်မည့် အလျင်မြန်ဆုံး အလဲထိုးကွက်ဖြင့်လည်း အနိုင်ယူခဲ့သည့် ONE Championship ပြိုင်ပွဲဝင်ကစားသမားတစ်ဦးအနေဖြင့် မှတ်တမ်းတင်ထား နိုင်ခဲ့သည်။
လာမည့် စနေနေ့၊ အောက်တိုဘာလ ၆ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သွားမည့် ONE: KINGDOM OF HEROES ပြိုင်ပွဲကြီးတွင် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်မည့်အားကစားသမားများကို မိတ်ဆက်ပေးသည့် ဤပွဲကြီးတွင် Bozhena Antoniyar ၏ ပြိုင်ဘက် Rika Ishige က ပရိတ်သတ်များရှေ့တွင် သူ၏လက်ဝှေ့လေ့ကျင့်မှုများကို ဟန်ရေးပြကစားပြသွားခဲ့သည်။
Rika Ishige က “ကျွန်မ ဒီပွဲအတွက် ၆ လလောက် အချိန်ယူပြီး လေ့ကျင့်ခဲ့ပါတယ်။ လေ့ကျင့်တဲ့နေရာမှာလည်း အကောင်းဆုံးပုံစံနဲ့ လေ့ကျင့်ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်မ ဒီပွဲကို အနိုင်ရလိမ့်မယ်လို့ ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်းယုံကြည်ထားပါတယ်။ Bozhena Antoniyar က တိုက်ခိုက်ပုံ သိပ်ကောင်းတဲ့သူပါ။ သူက သန်လည်းသန်မာပါတယ်။ ကျွန်မတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ ပွဲက သိပ်ကို ကြည့်လို့ကောင်းတဲ့ပွဲတစ်ပွဲဖြစ်လာမှာပါ။ ကျွန်မက သူ့ထက် အတွေ့အကြုံရှိတဲ့သူဆိုတာ မှန်ပေမယ့် ကိုယ်ခံပညာသိုင်းပေါင်းစုံအားကစားသမားဘဝမှာ ကျွန်မ ၅ ကြိမ်ပဲ ထိုးသတ်ဖူးပါသေးတယ်။ သူကလည်း အရင်က ပြိုင်ပွဲဝင်ဖူးတာတွေရှိတာကြောင့် ဒီပွဲက မျှတတဲ့ပွဲပါပဲ။ ကျွန်မရဲ့ မွေးရပ်မြေမှာ တတိယအကြိမ်မြောက်ယှဉ်ပြိုင်ရတဲ့ပွဲဖြစ်လို့ ကျွန်မ သိပ်ကို စိတ်လှုပ်ရှားနေမိပါတယ်။ ကျွန်မတို့နှစ်ယောက်လုံးက အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ထားကြတာကြောင့် ဒီပွဲက ပွဲကောင်းတစ်ပွဲ ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ ကျွန်မပြောရဲပါတယ်။” ဟု ပြောကြားသည်။
ONE: KINGDOM OF HEROES ပွဲကြီးတွင် ထိုင်းနိုင်ငံသား The Ring Magazine နှင့် WBC စူပါ ဖလိုင်းဝိတ်ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံ Srisaket Sor Rungvisai နှင့် ၎င်းအားစိန်ခေါ်သူ မက်ဆီကိုနိုင်ငံသား Iran “MagnifiKO” Diaz တို့က အဓိကပွဲစဉ်ကြီးတွင် ထိုးသတ်သွားမည်ဖြစ်သည်။ မိတ်ဆက်ပွဲကြီးသို့ ONE Championship ၏ ဥက္ကဌနှင့် စီအီးအိုဖြစ်သူ Chatri Sityodtong ၊ Nong-O Gaiyanghadao ၊ Mehdi Zatout ၊ Petchmorrakot Wor. Sangprapai ၊ Alaverdi Ramazanov ၊ Shinya Aoki ၊ Ev Ting ၊ Singtongnoi Por Telakkun ၊ Mashashida Kudo ၊ Rika Ishige ၊ Bozhena Antoniyar ၊ Petchdam Kaiyanghadao ၊ Kenny Tse တို့အပါအဝင် လာမည့် စနေနေ့ညပွဲကြီးတွင် ယှဉ်ပြိုင်ကြမည့် အားကစားသမားအချို့လည်း တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။
မွနျမာနိုငျငံသူ Bozhena Antoniyar က လာမညျ့ စနနေညေ့တှငျ Rika Ishige ကို အကောငျးဆုံးရငျဆိုငျယှဉျပွိုငျသှားမညျဟု ဆို
ထိုငျးနိုငျငံ၊ ဘနျကောကျမွို့၊ ၂၀၁၈ ခုနှဈ အောကျတိုဘာလ ၂ ရကျ။ ။ အာရှသမိုငျးတှငျ အကွီးမားဆုံး ကမ်ဘာ့အားကစား ပွိုငျပှဲမြားကို ဦးစီးကငျြးပလကျြရှိသော ONE Championship™ (ONE) သညျ ONE: KINGDOM OF HEROES ပွိုငျပှဲဝငျအားကစားသမားမြားနှငျ့ မိတျဆကျပှဲကွီးကို အောကျတိုဘာလ ၁ ရကျနေ့၌ ဘနျကောကျမွို့ရှိ Central World Plaza တှငျ ကငျြးပပွုလုပျခဲ့သညျ။ အခမျးအနားသို့ မွနျမာနိုငျငံကိုယျစားပွု၍ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျမညျ့ Bozhena Antoniyar နှငျ့ ၎င်းငျး၏ပွိုငျဘကျ Rika Ishige တို့လညျး တကျရောကျခဲ့သညျ။
ONE: KINGDOM OF HEROES ပွိုငျပှဲကွီးကို လာမညျ့ အောကျတိုဘာလ ၆ ရကျ၊ စနနေတှေ့ငျ ဘနျကောကျရှိ Impact Arena အားကစားရုံတှငျ ကငျြးပသှားမညျဖွဈကာ ပွညျတှငျးပွညျပ ကိုယျခံပညာသိုငျးပေါငျးစုံအားကစားသမားမြား၏ အကောငျးဆုံးစှမျးရညျပွယှဉျပွိုငျမှုမြားကို တငျဆကျသှားမညျဖွဈသညျ။ ပွိုငျပှဲကွီးတှငျ အမြိုးသမီးတှဲဆိုငျး ၂ ခုပါဝငျရာ၊ မွနျမာနိုငျငံသူ Bozhena Antoniyar နှငျ့ ထိုငျးနိုငျငံသူ Rika Ishige တို့က ပှဲဆိုငျးတဈခုအဖွဈ ရငျဆိုငျယှဉျပွိုငျသှားကွမညျဖွဈသညျ။
Bozhena Antoniyar က မွနျမာနိုငျငံကို ကိုယျစားပွု၍ယှဉျပွိုငျသညျ့ ပထမဦးဆုံးပွညျပပှဲစဉျဖွဈသညျ့အတှကျ စိတျလှုပျရှားမိသျောလညျး မိမိကိုယျကို ယုံကွညျမှုအပွညျ့ရှိသောကွောငျ့ ပွိုငျဘကျကို အကောငျးဆုံးရငျဆိုငျသှားမညျဖွဈကွောငျး ဆိုသညျ။
Bozhena Antoniyar က “ဒီပှဲအတှကျ ကြှနျမအမြားကွီးပွငျဆငျထားသလို ယှဉျပွိုငျဖို့လညျး ရငျခုနျစိတျလှုပျရှားနပေါတယျ။ Rika က ကြှနျမအတှကျ ပွိုငျဘကျကောငျးတဈယောကျပါ။ အခု ကြှနျမ MMA က ဆရာတှနေဲ့ သခြောလကေ့ငျြ့နပေါတယျ။ ကြှနျမ အဓိက Boxing ကစားသမားဖွဈပမေယျ့ MMA မှာက အားကစားနညျးပေါငျးစုံဖှဲ့စညျးထားတာဖွဈတဲ့အတှကျ ကနျြတဲ့အားကစားနညျးတှကေိုလညျး လလေ့ာပွီး သငျယူနပေါတယျ။ လူကိုယျတိုငျလာရောကျပွီး အားမပေးနိုငျပမေယျ့ အဝေးကနအေားပေးတဲ့ပရိတျသတျတှအေတှကျ ဂုဏျယူနိုငျမယျ့ရလဒျမြိုးရအောငျ ကွိုးစားပါမယျလို့ မွနျမာပွညျက ပရိတျသတျတှကေိုပွောခငျြပါတယျ။ ဒီပှဲက ကြှနျမရဲ့ပထမဦးဆုံး ပွညျပပှဲဖွဈလို့ ကြှနျမရှဆေ့ကျလြှောကျရမယျ့ ဘဝအတှကျ သိပျကိုအရေးပါပါမယျ။ နောကျပှဲတှမှောလညျး မွနျမာနိုငျငံအတှကျ အကောငျးဆုံးဆကျပွီး လုပျဆောငျသှားဖို့ရှိပါတယျ။ အခုတော့ ဒီပှဲအတှကျကို အာရုံစိုကျပွီး အကောငျးဆုံးယှဉျပွိုငျသှားနိုငျဖို့ ကွိုးစားနပေါတယျ။” ဟု ပွောကွားသညျ။
Bozhena Antoniyar သညျ ONE Championship ပွိုငျပှဲကွီးတှငျ ယှဉျပွိုငျသညျ့ မွနျမာအမြိုးသမီးကစားသမားနှဈယောကျထဲတှငျ တဈယောကျဖွဈလာရုံသာမကဘဲ ပွိုငျပှဲကွီး၏ အကျတနျဝိတျတနျး (Atomweight) ၌ ပထမဦးဆုံးပွိုငျရသညျ့ပှဲတှငျပငျ ပွိုငျဘကျကို သမိုငျးဝငျမညျ့ အလငျြမွနျဆုံး အလဲထိုးကှကျဖွငျ့လညျး အနိုငျယူခဲ့သညျ့ ONE Championship ပွိုငျပှဲဝငျကစားသမားတဈဦးအနဖွေငျ့ မှတျတမျးတငျထား နိုငျခဲ့သညျ။
လာမညျ့ စနနေေ့၊ အောကျတိုဘာလ ၆ ရကျနတှေ့ငျ ကငျြးပပွုလုပျသှားမညျ့ ONE: KINGDOM OF HEROES ပွိုငျပှဲကွီးတှငျ ပါဝငျယှဉျပွိုငျမညျ့အားကစားသမားမြားကို မိတျဆကျပေးသညျ့ ဤပှဲကွီးတှငျ Bozhena Antoniyar ၏ ပွိုငျဘကျ Rika Ishige က ပရိတျသတျမြားရှတှေ့ငျ သူ၏လကျဝှလေ့ကေ့ငျြ့မှုမြားကို ဟနျရေးပွကစားပွသှားခဲ့သညျ။
Rika Ishige က “ကြှနျမ ဒီပှဲအတှကျ ၆ လလောကျ အခြိနျယူပွီး လကေ့ငျြ့ခဲ့ပါတယျ။ လကေ့ငျြ့တဲ့နရောမှာလညျး အကောငျးဆုံးပုံစံနဲ့ လကေ့ငျြ့ခဲ့ပါတယျ။ ကြှနျမ ဒီပှဲကို အနိုငျရလိမျ့မယျလို့ ၁၀၀ ရာခိုငျနှုနျးယုံကွညျထားပါတယျ။ Bozhena Antoniyar က တိုကျခိုကျပုံ သိပျကောငျးတဲ့သူပါ။ သူက သနျလညျးသနျမာပါတယျ။ ကြှနျမတို့နှဈယောကျရဲ့ ပှဲက သိပျကို ကွညျ့လို့ကောငျးတဲ့ပှဲတဈပှဲဖွဈလာမှာပါ။ ကြှနျမက သူ့ထကျ အတှအေ့ကွုံရှိတဲ့သူဆိုတာ မှနျပမေယျ့ ကိုယျခံပညာသိုငျးပေါငျးစုံအားကစားသမားဘဝမှာ ကြှနျမ ၅ ကွိမျပဲ ထိုးသတျဖူးပါသေးတယျ။ သူကလညျး အရငျက ပွိုငျပှဲဝငျဖူးတာတှရှေိတာကွောငျ့ ဒီပှဲက မြှတတဲ့ပှဲပါပဲ။ ကြှနျမရဲ့ မှေးရပျမွမှော တတိယအကွိမျမွောကျယှဉျပွိုငျရတဲ့ပှဲဖွဈလို့ ကြှနျမ သိပျကို စိတျလှုပျရှားနမေိပါတယျ။ ကြှနျမတို့နှဈယောကျလုံးက အကောငျးဆုံးပွငျဆငျထားကွတာကွောငျ့ ဒီပှဲက ပှဲကောငျးတဈပှဲ ဖွဈလာလိမျ့မယျလို့ ကြှနျမပွောရဲပါတယျ။” ဟု ပွောကွားသညျ။
ONE: KINGDOM OF HEROES ပှဲကွီးတှငျ ထိုငျးနိုငျငံသား The Ring Magazine နှငျ့ WBC စူပါ ဖလိုငျးဝိတျကမ်ဘာ့ခနျြပီယံ Srisaket Sor Rungvisai နှငျ့ ၎င်းငျးအားစိနျချေါသူ မကျဆီကိုနိုငျငံသား Iran “MagnifiKO” Diaz တို့က အဓိကပှဲစဉျကွီးတှငျ ထိုးသတျသှားမညျဖွဈသညျ။ မိတျဆကျပှဲကွီးသို့ ONE Championship ၏ ဥက်ကဌနှငျ့ စီအီးအိုဖွဈသူ Chatri Sityodtong ၊ Nong-O Gaiyanghadao ၊ Mehdi Zatout ၊ Petchmorrakot Wor. Sangprapai ၊ Alaverdi Ramazanov ၊ Shinya Aoki ၊ Ev Ting ၊ Singtongnoi Por Telakkun ၊ Mashashida Kudo ၊ Rika Ishige ၊ Bozhena Antoniyar ၊ Petchdam Kaiyanghadao ၊ Kenny Tse တို့အပါအဝငျ လာမညျ့ စနနေညေ့ပှဲကွီးတှငျ ယှဉျပွိုငျကွမညျ့ အားကစားသမားအခြို့လညျး တကျရောကျခဲ့ကွသညျ။